शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा बजेट
काठमाडौ, १६ जेठ । शहरी पुर्वाधार विकासको आधार भन्ने नाराका साथ सरकारले शहरी विकास तथा एकिकृत वस्ती विकासका लागि ३० अरब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाण्डौलाई सेटेलाईट सहर बनाउने लक्ष्यसहित जनता आवास कार्यक्रमलाई २ अरब ४४ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष यथावत राख्दै विद्यालय शिक्षा सुधारमा ६६ […]
भूकम्प पिडितलाई डेढ खर्व बजेट
काठमाडौ, १५ जेठ । नेपाल सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको आ.व. ०७४/७५ को करिब १३ खर्ब बजेटमा भूकम्प प्रभावितलाई डेढ खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेट भाषण अपरान्ह ४ बजे बस्ने संसद बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्दैछन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्र एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइएको छ । […]
आर्थिक वर्ष ०७४ /७५ को बजेट आज प्रस्तुत हुने
काठमाडौ, १५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को बजेट सोमबार प्रस्तुत गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले १२ खर्ब ८० अर्बको बजेट व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले बजेट पेश गर्न लागेको हो । निर्वाचनअघि कामचलाउ सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले यसपटक नयाँ […]
आर्थिक क्षेत्रको सुधार उत्साहजनक
काठमाडौ, १४, जेठ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रको सुधार उत्साहजनक रहेको जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक स्थितिको समिक्षा २०७४ र आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को प्रगति विवरण’ संसदमा पेश गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको सुधार उत्साहजनक रहेको बताएका हुन् । उनले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि, पूँजीगत खर्चको […]
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौ, १४ जेठ । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । आईतबार बसेको संसद बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । विहिबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदमा पेश गर्नु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संक्षिप्त छलफलपछि आईतबार पारित गरिएको हो । त्यस अवसरमा […]
विद्युत आपुर्ती बढेपछि उद्योग ५४ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन
काठमाडौ, १० जेठ । विद्युत् आपुर्ती सहजभएपछि चालु आवको पहिलो ६ महिनामा उद्योगहरुले कुल उत्पादन क्षमताको औसतमा ५४।२ प्रतिशत उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढीबाट ५७ जिल्लाहरुमा गरिएको स्थलगत सर्वेक्षण र सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रियाले यस्तो देखाएको हो । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा भने औद्योगिक […]
जेठ १५ मा बजेट ल्याउने सरकारको निर्णयमा राप्रपाको समर्थन
काठमाडौ, ९ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणाले संविधानमै व्यवस्था भए अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउने सरकारको निर्णय स्वभाविकै भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सरकारले नयाँ कार्यक्रम नथपी ल्याउन लागेको बजेट निर्वाचन आचारसंहिता विपरित नहुने पनि उल्लेख गरे […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,बिजनेस / अर्थ,मुख्य समाचार,राजनीति,राजनीति मुख्य Read More »
जेठ १५ गते पूर्ण आकारको बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री महरा
काठमाडौ, ८ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते पूर्ण आकारको बजेट आउने स्पष्ट पारेको छ । उपप्रधामन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जेठ १५ गते पूर्ण आकारको बजेट आउने बताएका छन् । उनले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुने भएकाले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम भने समावेश नहुने स्पष्ट पारे । सोमबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बजेट बारे छलफल गर्न आयोजित […]
नेपाल र भारत सरकारबीच बल्ब खरिद गर्ने सम्झौता हुन्छ- ऊर्जामन्त्री शर्मा
सल्यान, २६ बैसाख / ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले भारत सरकारबाट खरिद गर्न लागेको एलइडी बल्बमा बाहिर आएजस्तो कुनै चलखेल नभएको बताएका छन्। गृह जिल्ला रुकुम जाने क्रममा श्रीनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले बल्ब खरिद गर्ने कुरा नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता गरेर हुने कुरा हो, यसमा कुनै चलखेल नभएको बताए । उनले खलङ्गा शीतलपाटी खानेपानीका […]
१५ जेठमा आउला त बजेट ? यस्तो छ तयारी
काठमाडौं, २५ बैसाख – संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले दुई चरणका निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन आचारसंहिताले नदिने बताएको छ । प्रतिपक्षी एमालेले पनि बजेटपछि हुने निर्वाचन स्वीकार नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, यो जटिलताबारे प्रमुख दलहरुबीच गम्भीर छलफल नै भएको छैन । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल […]